Mpanoratra Sady Mpanao Gazety Belarosiana Svetlana Alexievich No Nandrombaka Ny Loka Nobel Literatiora 2015 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2015 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Nederlands, English
Svetlana Alexievich, nandrobaka ny Loka Nobel Literatiora 2015. Sary avy amin'ny Wikimedia Commons.
Norombahan'ilay mpanoratra Belarosiana Svetlana Alexievich ny loka Nobel Literatiora 2015. Niarahaba an'i Alexievich tamin'ny “asa sorany manana feo maro, tsangambaton'ny fijaliana sy ny herim-po amin'ny androntsika ankehitriny” ny Akademia Soedoà, mpanolotra ny loka manandaza.
VAOVAO FARANY natolotra ho an'ilay mpanoratra Belarosiana Svetlana Alexievich ny loka Nobel Literatiora 2015
Nahazo dera tamin'ireo lahatsoratra fanadihadiana, notontosaina tamin'ny alalan'ny antsafa lalina marobe, mampiseho ny fiainana sy ny ady tao amin'ny Firaisana Sovietika sy ny vanim-potoana taorian'ny naharava an'i Sovietika ilay mpanoratra Belarosiana manoratra amin'ny teny Rosiana sady mpanao gazety mpanadihady, Alexievich. Izy no vehivavy faha-14 nahazo ny iray tamin'ireo loka Nobel Literatiora 111, ary mpanoratra amin'ny teny Rosiana voalohany nahazo ity voninahitra ity hatramin'ny 1987 nahazoan'ilay poeta, Joseph Brodsky ny loka.
Nilaza tamin'ny mpanao gazety i Sara Danius, sekretera maharitra ao amin'ny Akademia Soedoà nandritra ny fanambarana ny loka tao Stockholm tamin'ny 8 Oktobra fa “nanolotra fitaovana vaovao ara-tantara ho antsika i i Alexievich ary nanolotra endrika vaovao ho antsika.” Nanasongadina ny sangan'asan'ity mpanoratra ity amin'izao fotoana izao ihany koa ny Wall Street Journal, niantso azy ho ” feo mpitsikera ny mpitarika ny fireneny ary feo malaza manohitra ny fitsabahan'i Rosia any Okraina.”
Nadika tamin'ny teny maro sy nahazo loka iraisam-pirenena ny sangan'asan'i Alexievich, mampifangaro tantara foronina sy lahatsoratra fanadihadiana tsotra mba hampitàna ireo tantara mampihetsi-po amin'ny andraikitry ny vehivavy tamin'ny Ady Lehibe faha-2 sy ny lozan'i Chernobyl izay nifototra amin'ny fijoroana vavolombelona. Saingy tsy navoaka tao an-tanindrazany, ao Belarosia, eo ambanin'ny fitondran'ny filoha Alyaksandr Lukashenka ireo bokiny ireo noho ny famoretana tsy an-kiato mihatra amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny sivana mibahan-toerana mandavataona.
Nonina tamin'ny firenena Eoropeana maro no nandanian’ i Alexievich ny ankamaroan'ny androm-piainany, nandeha tany noho ny fahazoany vatsin'ny mpanoratra. Efa nitsikera ampahibemaso ny fanjakazakan'i Lukashenko ao Belarosia izy, anisan'izany ny fanitsakitsahana mahatsiravina ny zon'olombelona sy ny fampiasana hatrany ny fanamelohana ho faty.
Raha niresaka nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao Minsk, Belarosia, fotoana fohy taorian'ny nanambarana ny loka, i Alexievich dia nilaza fa “tsy olonn'ny sakan-dalana izy,” fa ny toe-draharaha ara-politika ankehitriny ao Belarosia no “nisarika anay ho amin'ny sakana, satria mahamenatra ny zava-mitranga. “
Mitantara ny horohoro sy ny zava-tsarotry ny fiainana tao anatin'ny krizy ara-tantara isan-karazany amin'ny fampiasana ny mpisolo-tena voalohany [“izaho” na “aho”] amin'ny tenin'ny vavolombelona, hitan'i Alexievich fa lasa ankafizin'ny mpanao tsikera [mpanombana] ny “lahatsoratra fanadihadiany”. Nankasitraka ny fahavononan'ny mpanoratra hiaro ny feon'ny loharanom-baovaony ny Akademia Soedoà ary nilaza fa “amin'ny alalan'ny fomba fiasany miavaka – fandraiketana tsara ny feon'olombelona – manamafy ny fahatakarantsika ny vanim-potoana manontolo i Alexievich .”
Nanomboka nanao fandraisam-peo ny tantaran'ireo vehivavy miaramila nandray anjara tamin'ny Ady Lehibe faharoa tamin'izy tanora mpanangom-baovaon'ny gazety tao an-toerana iray teo Belarosia tamin'ny taona 1970 i Svetlana Alexievich, 67 taona ankehitriny . Natao tao anatin'ny bokiny voalohany ny tantara, “Endrika Tsy Vehivavy Amin'ny Ady.” Nandritra ny fotoana ela, tsy navela hivoaka izany boky izany satria tantaran'olona manokana ary tsy manambara ny andraikitry ny fanjakana Komonista, ary tamin'ny taona 1985 vao natao pirinty.
Mbola mampiasa ny fomba fijoroana vavolombelona mampiasa mpisolo-tena voalohany “izaho” i Alexievich raha nanadihady ny fanafihan'ny Sovietika an'i Afghanistan ary nandrakitra ireo tantara mampalahelon'ireo renim-pianakaviana namoy zanaka tao anatin'ny ady ao amin'ny bokiny manaraka, “Zinky Boys” (Zatovolahy Zinky). “Mila misambotra olona iray aho rehefa amin'ny fotoana voahozongozona izy ireo,” hoy i Alexievich tamin'ny gazetiboky mpivoaka isan-kerinandro Ogonyok tamin'ny 2014. “Eny an-dalambe hatrany ny sofiko.”
Nitodika tany amin'ny loza noklearin'y Chernobyl ny sain'ity mpanoratra sady mpanao gazety ity, na dia nitranga tany Okraina tamin'ny taona 1986 aza ny loza nokleary dia niantraika tamin'i Belarosia kokoa noho ny firenena hafa, satria tena eo akaikin'ny sisintany ilay toerana. Tamin'ny taona 1998, namoaka ny “Feo avy amin'i Chernobyl” izy, fitambarana tantara mampihetsi-po avy amin'ny olona niasa tamin'ny fanadiovana ny nokleary taorian'ny loza. Maro tamin'ireo natao antsafa no efa namoy ny ainy, ary mijanona ao anatin'ny asa sorany ny feon'izy ireo.
Nilaza i Alexievich fa mahamenatra toa tsy heno tamin'ny Loka Nobel ireo olona tantaraina tamin'ny “Feon'i Chernobyl”.
Ny boky farany an'i Alexievich, “Fotoana Fipireria” (2013) no sangan'asany farany tsy noforonina izay manadihady ny lovam-pisainana Sovietika nandritra ny 20 taona mahery taorian'ny firodanan'ny ny URSS, ary farany amin'ireo andia-bokiny lehibe, “Feon'ny Nofinofin-tsaina (Utopia),” izay aseho amin'ny alalan'ny fomba fijerin'olona tsirairay ny fiainana ao amin'ny Firaisana Sovietika.
Ny fahorianay no renivolanay lehibe indrindra. Izany no hany zavatra trandrahantsinay tsy an-kiato. Fa tsy solika, tsy etona, fa fijaliana. Miahiahy aho fa izany no mitarika, mampihemotra, ary mahagaga ny tandrefana mamaky ny bokiko.
Niteraka tsikera teo amin'ny avo ara-pianarana Belarosiana ity mpanoratra ity noho izy manoratra amin'ny teny Rosiana fa tsy amin'ny teny Belarosiana, manohariana ny famelomana indray ny kolontsaina sy ny fitenim-pirenena ao Belarosia. Nilaza i Alexievich tenany fa “misy Eoropeana kokoa” ao ny tantaram-piainany na Rosiana izany na Belarosiana.
“Mandray ny tenako ho olona avy amin'ny tontolo Belarosiana, avy amin'ny kolontsaina Rosiana, ary kosmopolitana (maro fiaviana) eto amin'izao tontolo izao aho.
Teraka tamin'ny 31 Mey 1948 tao an-tanànan'i Okraina ao Ivano-Frankivsk i Svetlana Alexievich, Belarosiana ny rainy ary Okrainiana ny reniny. Rehefa nahavita raharaha miaramila ny rainy, nifindra tany Belarosia ny fianakaviana, izay nanaovan'ny ray aman-dreniny ny asan'ny mpampianatra. Rehefa nahavita fianarana i Alexievich dia niasa ho mpampianatra sady mpanao gazety, ary nianatra asa fanaovan-gazety tao amin'ny Oniversiten'i Minsk tamin'ny 1967-1972. Monina ao Minsk izy amin'izao fotoana izao, niverina tao izy rehefa avy nipetraka tany Eoropa mba hiasa hanao ny bokiny vaovao indray.